Nahazo ny lahatsoratry ny OMS ny filoha Shiliana mivoaka, Michelle Bachelet
Home » Ny olona ao amin'ny Travel & fizahan-tany » Nahazo ny lahatsoratry ny OMS ny filoha Shiliana mivoaka, Michelle Bachelet
Janoary 20, 2018
Nanaiky ny hitarika ny filankevitry ny Fikambanana Iraisam-pirenena Momba ny Fahasalamana ho an'ny reny, ny zaza vao teraka ary ny fahasalaman'ny zaza ny filoham-pirenena shiliana Michelle Bachelet taorian'ny nahavitany ny andraikiny tamin'ny 11 martsa. Ny fanambarana dia taorian'ny fivoriana 10 janoary tao amin'ny lapan'ny filoha tany Santiago, izay natolotry ny mpitarika ny WHO an'i Bachelet ny toerana.
"Voninahitra lehibe ho an'ny PMNCH izany," hoy i Helga Fogstad, talen'ny fahefana mpanatanteraka, tamin'ny fanambarana iray. Notanisainy ny «fanoloran-tena tsy manam-petra nataon'i Bachelet ary ny finoany tsy miovaova amin'ny zon'ny vehivavy, ny zaza ary ny tanora hanana fiainana, fahasalamana ary fitoviana» noho ny fanaovana azy ho "safidy mety indrindra hanohizany ny iraka manan-danja" an'ny fikambanana.
Niorina tamin'ny 2005, ny fiaraha-miasa dia maherin'ny 1,000 ny mpikambana ao amin'ny firenena 77. Ny tanjony dia ny hanomezana toeram-pampianarana, fikambanana tsy miankina amin'ny fanjakana, fikambanan'ireo fikarakarana ara-pahasalamana ary andrim-panjakana hafa sehatra hanatsarana ny fahasalaman'ny reny, ny zaza vao teraka ary ny zaza amin'ny alàlan'ny fandrindrana ny paikady sy ny loharanon-karena manerana an'izao tontolo izao. Bachelet dia hitantana ny filankevitry ny fiaraha-miasa miaraka amin'ny volontaire manomboka amin'ny volana aprily, handimby an'i Graça Machel, ilay mpanao politika Mozambikana ary ny fanampiana iraisam-pirenena.
Bachelet dia ho tonga amin'ny asany vaovao miaraka amin'ny résumé midadasika miresaka ny fahasalamana iraisam-pirenena sy ny olan'ny vehivavy. Ho fanampin'ny fe-potoana roa maha filoha vehivavy voalohany an'i Silia tamin'ny 2006 ka hatramin'ny 2010 ary 2014 ka hatramin'ny 2018, dia nahazo mari-pahaizana momba ny fitsaboana amin'ny fandidiana miaraka amin'ny fahaizana manokana momba ny fitsaboana zaza an-jaza sy ny fahasalamam-bahoaka. Izy dia minisitry ny fahasalamana sy minisitry ny fiarovana tany Silia tany am-piandohan'ny taona 2000.
Teo anelanelan'ny filoham-pirenena, Bachelet koa dia talen'ny fanatanterahana voalohany an'ny UN Women, manamboninahitra iray miaraka amin'ny hetsika UN Woman Every Child an'ny UN ary filohan'ny hetsika iraisan'ny International Labor Organization sy ny WHO.
Bachelet dia mpikambana ao amin'ny birao fanelanelanana avo lenta izay vao noforonin'ny sekretera jeneralin'ny ONU António Guterres. Tamin'ny fotoana iray, Bachelet dia iray amin'ireo filoham-panjakana maromaro tany Amerika atsimo, niaraka tamin'i Cristina Kirchner avy any Arzantina, Dilma Rousseff avy any Brezila ary Laura Chinchilla avy any Costa Rica, izay tsy eo amin'ny fitondrana intsony.
Bachelet, 66 taona, dia hanatanteraka ny andraikiny amin'ny toerany vaovao mandritra ny fotoana ipetrahany any Chile, fa tsy hifindra any amin'ny foiben'ny WHO any Genève. “Ny marina dia hijanona ao amin'ny fireneko aho satria tiako ny tanindrazako ary satria mino aho fa tsy maintsy manohy mandray anjara amin'ny fari-pahaizan'ny olona azo atao,” hoy izy tamin'ny fampahalalam-baovao Shiliana. Nolazainy ihany koa fa hijanona any Chile izy mba “hiaro ny fanavaozana rehetra” napetrany nandritra ny naha filoha azy.
Bachelet dia nosakanan'ny fetra farany tsy handehanana hofidina amin'ny 2017 ary handimby an'i Sebastián Piñera, miliarderie afovoany afovoany izay nanompo tamin'ny fotoana voalohany naha filoha teo anelanelan'ny fe-potoana roa tsy nampisy an'i Bachelet.
Ireo mpandray anjara amin'ny fizahantany dia miomana amin'ny tsenan'ny Travel Caribbean
Ny bus fitaterana Tiorka nianjera tamin'ny hazo nahafaty mpandeha 11 ary naratra 46